विशेष – Page 57 – Medianp
मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन सुरु, विधिवत् रूपमा केन्द्रीय शासन प्रणालीको अन्त्य
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ०७, २०७४०९:१७
काठमाडौं, ७ माघ । इतिहासमा पहिलोपल्ट नेपालमा संघीयतामा औपचारिक प्रवेश गरेको छ । आज एकै दिन सातवटा प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यले सपथ लिँदैछन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका ५५० प्रदेश सांसदले फरक
नगरकोटको त्यो कालो रात
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शनिबार, माघ ०६, २०७४१४:११
‘अलि विस्तारो कुदाउन, आफ्नो यहाँ टाउको झर्ला जस्तो भइसक्यो चिसोले’, अलि वर सर्दै रजनीले भनिन् । ‘४०–४५ को स्पीड त छ फुच्चु कति कराएकी ?, केटाहरूकै पारा देखाइहाल्यो दिपेशले पनि । ‘अहिले नि चिसो खुवाउँछौ अनि
समानुपातिकतर्फ प्रदेशसभामा कुन दलकाे कति सीट ? यी हुन् विजयी उम्मेदवार
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ ०४, २०७४१५:२९
काठमाडौँ, ४ माघ । निर्वाचन आयोगले गत मङ्सिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रदेससभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको विजयी उम्मेदवारको नामावली आज सार्वजानिक गरेको छ । आयोगका अनुसार सार्वजानिक विजयी उम्मेदवारको नामावली यसप्रकारका रहेको छ । प्रदेश
१० तस्विरमा हेर्नुहोस्, जंगल सफारीको मज्जा
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ ०४, २०७४०९:०७
काठमाडौं, ४ माघ । पछिल्लो समय स्वदेशी तथा विदेशी दुवै पर्यटकको लागि चितवन र नवलपारासी हात्ती सफारीका लागि चर्चित रहेको छ । हात्ती तथा जीप सफारी मार्फत जंगल घुम्ने र जनावरको अवलोकन गर्न पर्यटकहरुको घन्टौ
सुमार्गी र सिरोहियाको झगडामा डा.उपेन्द्र महतोको हात, के थियो कारण ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ०३, २०७४११:१७
काठमाडौं, ३ माघ । विगत केही सातायता मुलुकका दुई ठूला सञ्चार उद्यमी कैलाश सिरोहिया र अजेयराज सुमार्गीबीचको विवादले सबैको ध्यान तानेको छ । दिनप्रतिदिन यी दुईको झगडा पेचिलो बन्दै गएको छ । थाहा सञ्चारका मालिक सुमार्गी
सिरोहियामाथि सुमार्गीको आरोपका चाङ, बैंकको ऋण चुकाउन नसकेर सिरोहिया जेल जाने अवस्था थियो (भिडियोसहित)
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, माघ ०१, २०७४१९:५९
काठमाडौं, १ माघ । व्यापारी अजेयराज सुमार्गीले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियामाथि गम्भीर आरोपहरु लगाएका छन् । काठमाडौंमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरि सुमार्गीले सिरोहियाले मिडिया सोसाइटी प्रयोग गरेर आफूमाथि ब्ल्याकमेलिङ गरेको आरोप लगाएका हुन्। कान्तिपुरलाई
माघ ७ गते नजिकिँदै, के छ संविधानमा ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, माघ ०१, २०७४१३:२४
काठमाडौं, १ माघ । माघ ७ गते आउन अब एक साता मात्र बाँकी छ । संविधानमा ‘२०७४ माघ ७ गतेभित्र सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने’ उल्लेख भएकाले यो मितिको चर्चा भएको हो । माघ ७ गतेसम्म
कांग्रेसमा एक्लिँदै देउवा, भ्रातृसंगठनमा गुटगत विवाद तीव्र
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, माघ ०१, २०७४१०:०५
काठमाडौं, १ माघ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करारी हार बेहोरेपछि नेपाली कांग्रेस अहिले इतिहासकै सबैभन्दा कठिन अवस्थामा आइपुगेको छ । निर्वाचनको पराजयको जिम्मा अहिले सबैले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवामाथि लगाएका छन् । महाधिवेशन सकिएको
के हो प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको सर्टिफिकेट फन्डा ? (कागजातसहित)
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, पुष ३०, २०७४०८:३९1
काठमाडौं, ३० पुस । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका विरुद्धमा डा.गोविन्द केसी अनशन बसे । उनी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका बर्खास्तीमा परेका डिन डा. शशी शर्माको पुनर्बहालीको फैसला गरेको भन्दै प्रधानन्यायधिस पराजुलीको विरुद्ध अनशन बसेका थिए । प्रधानन्याधिस पराजुली
प्रेमी गुमाएकी अभागी हर्षिका
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शनिबार, पुष २९, २०७४०९:१४
मनिष पौडेल ‘सुजनलाई आफ्नै नसा काटेपछि हस्पिटलको इमर्जेन्सीमा भर्ना गरिएको छ रे नि !’, जक्सनको चिया पसलमा दिनेशले एकै सासमा सुनायो । अक्सर टोलका १७ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका केटाहरु यहि जक्सनको चिया पसलमा दिन काट्ने